လက်ကား တရုတ် ပူပူနွေးနွေး ရိတ်သိမ်းရောင်းချမှု အရည်အသွေး ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစပ် ကြက်သွန်နီ အစေ့များ ထုတ်လုပ်သူ |Shuangxing
SXO No.1 ပါ။
4000 မှ 5000kgs/667m2။
350 ~ 400 ဂရမ်
6 ~ 8 စင်တီမီတာ
1. အလယ်အလတ်ကြာသော နေ့တွင် စူပါခရမ်းရောင် အရောင်မျိုးစုံ။၂။ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသော၊ အရွယ်အစားကြီးပြီး မြင့်မားသောကမ္ဘာလုံးပုံသဏ္ဍာန် မီးသီး။၃။အလေးချိန် 350-400g၊ မြင့်မားသောရောဂါခုခံမှု။၄။ကောင်းမွန်သောသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း။5.အရသာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
စိုက်ပျိုးအမှတ်-စိုက်ဧရိယာ ၁၄ မှ ၁၆ စင်တီမီတာ ၊အပင်အရေအတွက် ၂၃၀၀၀/၆၆၇ မီတာ ၂ ၊ စိုက်ပျိုးနည်း အစားထိုး စိုက်ပျိုးနည်း ၊ မျိုးစေ့ချဆေးပမာဏ 100 ဂရမ်/ 667 m2 ၊ ဒေသရာသီဥတုအရ စိုက်ပျိုးရာသီ။
Hebei Shuangxing Seeds Company ကို 1984 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် သိပ္ပံနည်းကျ မျိုးစေ့သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေါင်းစပ်ထားသော ပထမဆုံးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပုဂ္ဂလိက မွေးမြူရေး အထူးပြု နည်းပညာ လုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစေ့များကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 30 ကျော်သို့ တင်သွင်းထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို အမေရိက၊ ဥရောပ၊ တောင်အာဖရိကနှင့် Oceania တို့တွင် ဖြန့်ဝေထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းဆုံး ဖောက်သည် 150 နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားပါသည်။အရည်အသွေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဖောက်သည်များသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 90% မျိုးစေ့များကို ပြန်လည်မှာယူကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းအဆင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများသည် ဟိုင်နန်၊ ရှင်ကျန်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အခြားနေရာများစွာတွင် တည်ရှိပြီး မွေးမြူရေးအတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးသည်။
Shuangxing Seeds သည် နေကြာ ၊ ဖရဲသီး ၊ ဖရဲသီး ၊ squash ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ရွှေဖရုံသီး နှင့် အခြား ဟင်းရွက် မျိုးစေ့ အများအပြား ၏ မျိုးစေ့ အများအပြား ကို သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန တွင် ရေပန်းစား လာခဲ့ပါသည်။
1. သင်က ထုတ်လုပ်သူလား။
ဟုတ်တယ်, ငါတို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံရှိတယ်။
2. နမူနာများ ပေးနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်ရန်အတွက် အခမဲ့နမူနာများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
3. မင်းရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုက ဘယ်လိုလဲ။
အစမှအဆုံးအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုအာမခံရန်အတွက် အမျိုးသားကုန်စည်စစ်ဆေးရေးနှင့်စမ်းသပ်ရေးဗျူရို၊ အာဏာပိုင်ပြင်ပစမ်းသပ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း၊ QS၊ ISO ကိုအသုံးပြုပါသည်။
ယခင်- Hu Zi စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကုလားပဲပုံသဏ္ဍာန် ဘူးသီးစေ့ လက်ကားပုလင်း
နောက်တစ်ခု: တရုတ်စက်ရုံ Blocky ခေါင်းလောင်းမွှေး အစိမ်းရောင်စပ်ငရုတ်ကောင်းစေ့များ စိုက်ပျိုးရန်
အထွက်နှုန်းကောင်းပြီး ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သော အဖြူရောင်ကြက်ဥ...
ပူပူနွေးနွေး တရုတ်ကြက်သွန်နီ အစေ့အဆန် ဟင်းသီးဟင်းရွက် s...